ဘယ်ဟာ အရင်လုပ်မလဲ၊ သွားတိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် သွားပွတ်ကြိုးထိုးတာလား။ | Bezzia
သွားတိုက်ခြင်း နှင့် သွားပွတ်ကြိုး နှစ်ခုစလုံးသည် ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးကို လိုက်နာရန် အရေးကြီးပါသည်။ အခြားအချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ နည်းပညာ၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် အမှာစာကဲ့သို့ပင်. သွားတိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သွားပွတ်ကြိုးပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းမသိနိုင်လို့ သံသယတွေရှိနေလို့ပါ။ ကျွမ်းကျင်သူများကြားတွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံး ဗားရှင်းများထဲတွင် ဤကိစ္စတွင် အမှာစာသည် ထုတ်ကုန်ကို ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဟု ဆိုပါသည်။
အရေးကြီးတဲ့အချက်က သွားကြားပွတ်ကြိုးဖြတ်ခြင်းဟာ အလွန်သန့်ရှင်းတဲ့ ခံတွင်းရှိဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက အဲဒါကို အရင်လုပ်ရင် ဒါမှမဟုတ် ပြီးရင် အရေးမကြီးဘူး၊ စုတ်တံတစ်ခုစီနဲ့ ပုံမှန်လုပ်နေသရွေ့. လုပ်နေတဲ့အချိန်နဲ့အမျှ နေ့ရောညပါ နေ့တိုင်းလုပ်သရွေ့ နေ့စဥ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ အရေးမကြီးပါဘူး။
1 ပွတ်ကြိုးထိုးဖို့ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ။
1.1 ဘယ်အရာက ရှေ့ကလာတယ်၊ ဖြီးတယ်၊
1.2 လျှာသည် သွားသန့်ရှင်းရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သွားတိုက်ခြင်းဖြင့် မဖယ်ရှားနိုင်သော သွားများကြားတွင် အစာကျန်နေပါသည်။ သွားနဲ့ သွားဖုံးကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ စုပုံနေတဲ့ အစာအညစ်အကြေးတွေပါ။ ဤအကြွင်းအကျန်အားလုံးကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် သွားပွတ်ကြိုးကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ သွားပွတ်ကြိုးသည် သွားကြားတွင် ဖြတ်သွားသောအခါ၊ အဲဒီအစာအညစ်အကြေးတွေအားလုံးကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ နိန်ယူရန် မရောက်နိုင်။
သွားပွတ်ကြိုးအသုံးပြုနည်းမှာ မှန်ကန်သောနည်းလမ်းမှာ သွားကြားတွင် စုပုံနေသော အကြွင်းအကျန်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် သွားဖုံးထဲသို့ အနည်းငယ်ဝင်သွားခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာက အစာစားပြီးရင် လုပ်ပါ။သွားတိုက်ဖို့ အခွင့်အရေးမရှိရင်တောင် ဤနည်းဖြင့် ဘက်တီးရီးယားများ ပွားများခြင်းအန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားပါ။
ဘယ်အရာက ရှေ့ကလာတယ်၊ ဖြီးတယ်၊
မှန်ကန်သောအမှာစာဖြစ်သည်ကို သင်သံသယရှိပါက၊ ကျွမ်းကျင်သူများက ညွှန်ပြသည်မှာ ဘာမှမထူးခြားပါ။ အရေးကြီးတာက အဆင့်အနည်းငယ်ကို လိုက်နာဖို့ပါပဲ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ညအိပ်ရာမ၀င်ခင်မှာ တစ်နေ့ကို သွားတိုက်တံကို တစ်နေ့ ၂ ကြိမ်ကနေ ၃ ကြိမ်ကြား ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဤသည်မှာ ရောဂါရှောင်ရန် လိုအပ်သော အကြိမ်ရေဖြစ်သည်။ သွားနှင့်ခံတွင်း။ နည်းစနစ်ပိုင်းအရ လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သောနည်းပညာမလိုအပ်ဘဲ ပိုမိုကောင်းမွန်သော သန့်ရှင်းရေးကို ခွင့်ပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်အတွက် ဖြီးသည့်အချိန်သည် အနည်းဆုံး နှစ်မိနစ်ခန့် ကြာသင့်သည်။ စုတ်တံကို နေရာချသည့်အခါ၊ ၎င်းသည် ညွတ်သောအနေအထားနှင့် ၄၅ ဒီဂရီထောင့်တွင် ရှိနေကြောင်း သေချာစေသင့်သည်။ လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိရမယ်။ ပျော့ပျောင်းပြီး စက်ဝိုင်းပုံဖြစ်ပြီး သွားဖုံးများကို နှိပ်နယ်ပေးပါ။. သွားတိုက်တံကိုအသုံးပြုပြီးပါက ပွတ်တိုက်ရန်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်သော်လည်း သင်နှစ်သက်ပါက အခြားနည်းလမ်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အရေးကြီးတာက နေ့ဘက်မှာ မလုပ်နိုင်ရင် ညဘက် သွားတိုက်တဲ့အခါ ဒီအဆင့်ကို မကျော်လိုက်ပါနဲ့။ သွားကြားရှိ သွားပွတ်ကြိုးကို ဖြတ်ပြီး သွားဖုံးမွေးခြင်းကို ထိခိုက်စေပြီး သွားကြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီအတွက် ထပ်လုပ်ပါ။ ကောင်းမွန်တဲ့ သွားတိုက်ခြင်းကို အပြီးသတ်ဖို့အတွက် ခံတွင်းဆေးရည်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဤထုတ်ကုန်အမျိုးအစားသည် အစားအစာအကြွင်းအကျန်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သွားများသာမက ပါးစပ်နှင့် လျှာတို့မှ ဘက်တီးရီးယားများပါ၀င်သည်။
လျှာသည် သွားသန့်ရှင်းရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘက်တီးရီးယားတွေစုပုံစေတဲ့ အရင်းအမြစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ လျှာကို ပွတ်တိုက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ တူညီသော သွားတိုက်တံကို သင်သုံးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် သီးခြားတစ်ခုကို သင်ရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အလွန်အရေးကြီးပြီး မကြာခဏ သတိမမူမိတတ်ပါဘူး။ သွားတိုက်ရန် သင်အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်များကို ပညာရှိစွာ ရွေးချယ်ပါ။ ဖလိုရိုက် ပါဝင်သော သွားတိုက်ဆေး၊ သွားပေါက်ခြင်းကို တားဆီးရန် ကူညီပေးသည်။
စကားမစပ်, သင့်သွားတိုက်တံကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါသလား။ ဒီတစ်ကိုယ်ရေသုံး အိုးခွက်ပန်းကန်တွေကို သန့်ရှင်းပြီး ပိုးသတ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ မေ့ထားလေ့ရှိတဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်လို့ပါ။ အမြဲတမ်း မသန့်ရှင်းသော အခြားအရာဝတ္ထုများကို ရှာဖွေလိုပါက ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ အောက်ပါ link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ » ဘယ်ဟာ အရင်လုပ်မလဲ၊ သွားတိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် သွားပွတ်ကြိုးထိုးတာလား။
သင့်လက်တွဲဖော်ကို တချိန်တည်း ချစ်ပြီး မုန်းတီးဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။